नेपालमा पटक–पटक किन निम्तिन्छ अस्थिरता?
धैर्यकान्त दत्त काठमाडौं - मंगलबार, चैत १०, २०७७
नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले सबै भन्दा बढी दुहाइ दिने शब्द होे राजनीतिक ‘स्थायित्व’। विकास र समृद्धिलाई राजनीतिक दलहरूले स्थायित्वसँग जोड्दै आइरहेका छन्।
राजनीतिक स्थायित्वविना देश र जनता उँभो लाग्नै नसक्नै तर्क नेताहरूले स्थापित गरेका छन्। स्थिर सरकार नहुँदा मुलुकमा विकास, समृद्धि, सुशासन र सही दिशाको राजनीति नहुने नेताहरूले गर्ने तर्क यिनै हुन्।
लामो समयसम्म चल्ने पूर्ण बहुमतको सरकारलाई राजनीतिक दलहरूले स्थायित्व भन्ने गरेका छन्। र, नेपाली जनताले पनि राजनीतिक दलहरूले परिभाषित गरेको स्थायित्वलाई विश्वास पनि गर्दै आइरहेका छन्।
राजनीतिक दलहरूले भने अनुसार नै २०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई आफ्नो मत दिएर बहुमतमा पुर्‍याए। त्यो गठबन्धनले बहुमतमात्र होइन लगभग दुई तिहाइ नै पाएको थियो।
राजनीतिक दलहरूले नै भनिरहेजस्तो झन्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार द्रुत गतिमा चल्नुपर्ने थियो। मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ डोहाेर्‍याइ रहेको हुनुपर्दथ्यो। स्थायित्व पाएको सरकारले आमनागरिकका समस्या र कठिनाइ बुझेर नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
तर, दुई तिहाइ नजिकको सरकार तीन वर्ष नपुग्दै ढुलमुले अवस्थामा पुगिसकेको छ। बहुमतप्राप्त सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउन दलहरू कसरतमा जुटिरहेका छन्।
अर्थात् निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले बहुमतप्राप्त गर्दैमा मुलुकमा स्थायित्व हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा फेरि एकपटक नेपाली राजनीतिमा प्रमाणित भएको छ।
अहिले जस्तो अस्थिरता नेपालमा देखिएको यो पहिलो राजनीतिक घटना होइन।
पहिलो जनआन्दोलनको बलमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले ११० स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त गरेको थियो।
तर, तीन वर्ष नबित्दै कांग्रेस नेतृत्वको बहुमतको सरकारले २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो। मध्यावधि निर्वाचनमा ८८ सिट जितेर संसदमा ठूलो दल बनेको एमालेले सरकार बनायो।
त्यसपछि २०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १११ स्थानमा विजय हासिल गरेर पुनःबहुमत ल्याएर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो।
दोस्रोपटक बहुमत हासिल गरेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पूरा अवधि चल्न सकेन्। दुई वर्ष २०५८ सालमा कांग्रेसको सरकार ढल्यो। र, त्यसको कारण थियो दलभित्रको आन्तरिक किचलो।
त्यसपछि २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको माओवादीले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ झन्डै बहुमत ल्याएको थियो।
६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २३८ स्थानमा विजय हासिल गरेर माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो।
संविधान जारी गर्न नसकी पहिलो संविधानसभा विघटन भयो। त्यसपछि मुलुकमा २०७० मंसिर ४ गते दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो। ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस २०७ स्थान हासिल गरेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो।
नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता र अल्पआयुमै सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिको मौलाउने कुराको पुष्टि विगतका इतिहासबाट पनि हुन्छ।
र, राजनीतिक स्थिरताकै लागि दोस्रो संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट खोसेको छ। त्यतिमात्रै नभएर सरकारमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सम्बन्धमा पनि निश्चित व्यवस्था संविधानले गरिदिएको छ।
पटक–पटक किन आउँछ अस्थिरता?
नेपालको संविधान २०७२, ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् यसको विघटन गरिदिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको ओलीको सुरूवाति तर्क र हठरूलाई अन्ततः फागुन १३ गते सर्वोच्च अदातले झुट सावित गरिदिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलापछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइसके पनि अस्थिरता र अन्याेलताको संकट अझै टरिसकेको छैन।
राजनीतिक दलहरू सिद्धान्त र विधिको शासनप्रति प्रतिवद्ध हुन नसक्दा नेपालले पटक–पटक अस्थिरताको सामना गर्न परिरहेको राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन्।
जनता र मुलुकको हितभन्दा बढी राजनीतिक दल तथा नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दा बुहमतप्राप्त दलका साथै अन्य सरकारहरू पूर्ण आयु पूरा गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ।
विभिन्न आन्दोलनका कारण व्यवस्था र राज्यका संरचनाहरू परिवर्तन भएपनि राजनीतिकर्मीहरूको मनोवृत्तिमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। पञ्चायती हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुगिसकेपनि राज्य र राजनीतिकर्मीहरूको कार्यशैलीमा विगतको भन्दा ज्यादै अन्तर देखिँदैन। यसकारणपनि नेपाली जनताले पटक–पटक अस्थिरताको सामना गर्नु परिरहेको छ।
‘२०४६ सालको आन्दोलनपछि संविधान परिवर्तन भयो। तर, नेताहरूको मनोवृत्तिमा फरक आएन्। २०६३/०६३ पछि पनि परिवर्तन आएकै हो। राज्य पुनःसंरचना गर्ने कुरा थियो। तर, अपुरो संघीयता आएको छ,’ आयोमेलसँग लाभले भने,‘मनोवृत्ति उस्तै रह्यो। नेताहरूको मनोवृत्ति र कार्यशैली परिवर्तन हुनसक्दा जनताले समस्या भोग्नु परिरहेको छ।’
व्यवस्था परिवर्तन भएपनि राणा र पञ्चायतकै शैलीमा काम गर्ने राजनीतिकर्मीहरूको मनोवृत्ति अझै परिवर्तन हुन नसक्नुका साथै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने निकाय नहुँदा अप्ठ्यारा देखिन थालिएको उनले बताए।
‘नेताहरूले परिवर्तन हुनदिन चाहेनन्। राणा र पञ्चायतकालजस्तै शासन गर्न खोजे। अरूले त्यसो गर्‍यो भने मैले किन नगर्ने?,’ लाभ भन्छन्,‘यसलाई नियन्त्रण गर्ने कोही भएन। प्रशासनतन्त्रमाथि कसैको नियन्त्रण देखिएन्। अहिले सर्वोच्च अदालत भनौं वा अन्य संवैधानिक निकाय सबैमाथि प्रश्नवाचक चिह्न लागेको छ।’
राजनीतिकर्मीदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म कसैले जवाफदेहिता लिएको जस्तो नदेखिएको उनको भनाइ छ। सामान्य नागरिकले कानुन र संविधानको उल्लंघन गर्दा कारबाहीको भागि बन्नुपरे जस्तै राजनीतिकर्मीलाई पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्ने लाभले बताए।
‘एकजना सामान्य नागरिकले कानुन उल्लंघन गर्दा उ कारबाहीको भागि बन्नुपर्ने हुन्छ। कानुनअनुसार उसलाई कारबाही हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि यो संविधानविरुद्धको कदम हो कि होइन?,’ प्रश्न गर्दै लाभ भन्छन्,‘यसको जवाफदेही प्रधानमन्त्रीले लिने कि नलिने? कारबाही वा सजायको व्यवस्था हुनुपर्‍यो कि परेन?’
गलत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले पनि दोषी नदेख्नु अदालतको जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको लाभले बताए।
गलत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रणाली नै नेपालमा स्थापित हुन नसकेको बताउँदै उनले यस्ता प्रवृत्तिका कारण राजनीतिकर्मीहरूमा गलत मनोवृत्तिको विकास हुँदै गइरहेको जिकिर गरे।
गलत सिफारिस वा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
यसैगरी अदालतले गर्ने सबै निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै चित्त नबुझ्दो फैसलाप्रति प्रश्न उठाउने अधिकार नागरिकले पाउनुपर्ने लाभले बताए।
‘नेपालको संविधानले जनतालाई सार्वभौम भनेको छ, जनता सार्वभौम भएको नेपालको यो पहिलो संविधान हो,’ उनी भन्छन्,‘त्यसैले गलत फैसलाविरुद्ध नागरिकलाई आवाज उठाउने छुट दिने कि नदिने। गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई दण्ड सजायको भागिदार बनाउने कि नबनाउने? तर, हामीसँग यस्तो कुनै व्यवस्था नै छैन।’
पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने सरकार आउँदामात्र स्थिरता आउन नसक्ने बताउँदै उनले राजनीतिकर्मीबाट भइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्नतर्फ गम्भीरताका साथ दिन जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
नयाँ व्यवस्थाको सुरूवातमै रहेकोले परिवर्तनका लागि पर्याप्त समय रहेको हुँदा राज्यले त्यसतर्फ ध्यान दिनसके अस्थिरताको संकट समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ।